दिदीलाइ चिठी :
Naya Dainiki Author आईतबार, वैशाख १२, २०७८
प्रिय दिदीमा दर्शन अनि घर परिवारमा साइनो अनुसारको ढोग नमस्कार साथै भान्जामा न्यानो माया अनि मिठो सम्झना । यहाँ मलाई सन्चै आरामै छ, त्यहा तपाई हरुलाइ पनि पशुपतिनाथको कृपाले कुशल मङ्ग्ल छ होला भन्ने आसा राखेको छु । भिनाजु सङ्ग त फोनमा कुरा भइ रहन्छ, अर्को महिना नेपाल फर्कन्छु भन्नुभएको छ । यो युग डिजिटल युग हो, हरकोही डिजिटल पत्राचार तथा संवाद गर्छन् । म भने पुरानै शैलीमा पत्र कोर्दै छु, कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसलाई प्रत्यक्ष व्यक्त गर्न सकिदैन तर लेखेर शव्द द्वारा सजिलै र सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यहीँ सहजता लाई महसुस गर्दै भान्जाको लागि यो चिठी लेख्दै छु । हामीले सुनेका कतिपय कुराहरू हामी छिट्टै बिर्सन्छौ तर पढेका र अबलोकन गरेका कुराहरू भने अलि दीर्घ कालिन हुन्छन् । हुन् त दिदी, म भन्दा तपाईं, उमेरले जेठी अनि बुद्धिमान र पाकी हुनुहुन्छ । तर पनि दिदी, जसै भान्जाको विद्यालय जाने तथा नयाँ कुराहरू सिक्ने उमेर बढ्दै जाँदै छ, म भित्र उत्साह जाग्दै छ । किनभने बच्चाहरु भनेका काचो माटो हुन्, हामीले जस्तो किसिमको आकार अनि प्रकारमा ढाल्छौ, उनीहरू उस्तै बन्छन् । बच्चाहरु भनेका भोलिका कर्णधार हुन्, बच्चा हरु भनेका भोलिका शिक्षक हुन्, भोलिका आर्मी प्रहरी हुन्, भोलिका डाक्टर पाइलट हुन्, भोलिका पत्रकार लेखक हुन्, भोलिका प्रोग्रामर कोडर हुन्, भोलिका कृषक, भोलिका ड्राइभर, भोलिका प्रधानमन्त्री, भोलिका वैज्ञानिक, जति पनि अहिले हाम्रो देशमा फरकफरक क्षेत्रहरुमा नागरिक छन्, आजका बच्चा भोलि हामी जस्तै जिम्मेवार नागरिक हुन् । यीनीहरु लाई राम्रो संस्कार र राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन, कुनै पनि मानिस उचो निचो हुँदैन भन्ने जस्ता विविध कुराहरू बच्चालाई भनेर सचेत बनाउनु हाम्रो दायित्व हो ।
आफू सङ्ग भएका बस्तुहरु अरुलाइ पनि दिनुपर्छ, बाडिचुडी गर्नुपर्छ भन्ने गम्भीर बिषय सिकाउनु पनि आजको आवस्यकता हो । जानीनजानी हामी र हाम्रो समाजले हरेक क्षेत्रमा पर्खालहरु बनाएका छौं । यसलाई भत्काउनु पनि आजको आवश्यकता हो ।
एउटा बैज्ञानिक एक्सपेरिमेन्टमा बैज्ञानिक हरुले पाँच बादरलाइ एउटा पिन्जडामा राख्छन् , पिंजडा भित्र एउटा भर्र्याङ् र भर्र्याङ्को माथी पाँच वटा केरा राखिन्छ । ति पाँच बादर केरा खानलाई भर्र्याङ् माथी चड्न खोज्छन्, जसै चड्न खोज्छन् माथिबाट चिसो पानी बर्साइन्छ । त्यसपछि बादर हतारहतार तल झर्छन, पानी पनि पर्न बन्द हुन्छ । त्यहाँ भएका बादर एकपछी अर्को गर्दै भर्र्याङ् चड्ने कोसिस गर्छन् तर जति पटक माथी चढ्न खोज्छन् माथी बाट चिसो पानी बर्सिन्छ । त्यसपछि बादर हरुले के निर्णय गर्छन् भने त्यहाँ माथी जान खोज्यो भने माथी बाट चिसो पानी आउछ । त्यसैले त्यसपछि जुन बादर केरा तिर जान खोज्छ त्यहा भएका सबै बादरले उसलाई त्यहाँ बाट झारेर कुट्न थाल्छन् । बैज्ञानिकले त्यहाँ बाट एउटा पुरानो बादरलाई बाहिर निकाल्छन र एउटा नयाँ बादरलाई त्यहाँ राख्छन् , यसपटक बैज्ञानिकले चिसो पानी झार्न बन्द गर्छन् । जसै त्यो नयाँ बादरले केरा देख्छ, उ हतारहतार चढ्ने कोसिस गर्छ । त्यो देखेपछी त्यहाँ बसेका चार बादरले त्यसलाई त्यहा बाट तल झारेर पिट्छन । त्यो नयाँ बादरलाई केही थाहा हुन्न किन यस्तो भइ रहेको छ , उसले किन पिटाइ खाइ रहेको छ । फेरि त्यो नयाँ बादर भर्र्याङ्मा चड्न खोज्छ फेरि पनि त्यसलाई पहिले जसरी नै कुटिन्छ । त्यसपछि त्यो नयाँ बादरले बुझ्छ कि, माथी चढ्न मनाही छ, यदि कोहि अर्को चढ्न खोज्यो भने त्यसलाई पनि माथी चढ्न दिनु हुँदैन तर उसलाई यो थाहा हुन्दैन कि, किन चढ्न रोक लगाइएको छ । फेरि बैज्ञानिकले त्यस पिन्जडा बाट पुराना चार बादर मध्ये एउटा बादरलाई पिन्जडामा बाट बाहिर निकालेर नयाँ बादर राखिदिए । उसले पनि पहिलेको बादरले जस्तै चड्न खोज्यो, पहिलेको बादरले जस्तै पिटाइ खायो, फेरि चढ्न खोज्यो फेरि त्यसैगरी पिटाइ खाएपछि उसले पनि यो बुझयो कि भर्र्याङ्मा चढ्न मनाही छ, अरुलाइ पनि चढ्न दिनु हुँदैन । त्यसपछि बैज्ञानिक हरुले त्यहा भएका तीन पुराना बादरलाइ पनि एकएक गरेर बाहिर निकाले । अब त्यहाँ भित्र सबै नयाँ बादर थिए तर पनि कसैले माथी चढ्ने कोसिस गरिरहेका थिएनन् । किनभने तिनीहरु, सबैको दिमागमा के बसेको थियो भने भर्र्याङ् चढ्नु महानी छ, र चढ्न खोज्यो भने पिटाइ खाइन्छ तर तिनीहरु लाई यो थाहा थिएन कि किन चढ्न महानी छ । जबकी त्यहाँ अहिले चिसो पानी बर्साइएको थिएन तर पनि कोहि चढ्ने कोसिस गरिरहेका थिएनन् । यदि उनीहरुले चाहेको भए माथी चढेर केरा निकालेर बाढेर खान सक्थे । यस्तै धेरै प्रथा र बिश्वासहरु हाम्रो समाजमा पनि बनेका छन्, जुन प्रथाका कारण हरु उहिले नै सकिए, त्यस्तै बिचारहरु पनि सकिए तर पनि हामी हरुले ती प्रथा र प्रचलन अहिले सम्म मानदै आएका छौँ । किन, भन्ने कारण सोध्दैनौ, प्रश्न गर्दैनौं, तर बच्चा हरुले जिज्ञासु हुन्छन् , उनी हरुले प्रश्न गर्छन् तर हाम्रो समाजले परिपक्व उत्तर दिन सक्दैन । केही सोधखोज नगरी कि त पुरानै शैलीमा रुढीबादी उत्तर दिन्छौं, कि त भन्दै भन्दैनौ । नयाँ पुस्तालाई पनि यहीँ सिकाउदै छौँ, त्यहीँ भएर कुनै पनि नयाँ कुरा सिकाउनु अघि नकारात्मक कुरा भन्दा पनि सकारात्मक कुरामा बढी जोड दिएर भान्जालाइ नयाँ कुरा सिकाउनु है...दिदी ।
हाम्रो समाजमा असफलता लाई राम्रो मानिदैन, तर बास्तबमा असफल हुनु भनेको राम्रो कुरा हो, फेल भएर केही नसिक्नु चै बल्ल नराम्रो कुरा हो । त्यसैले असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भनेर चिन्न सिकाउनुहोस ।
हात अनि चिना हेराउन तपाई ज्योतिषी कहाँ जानू हुन्छ होला । ज्योतिषीले भनेका राम्रा र नराम्रा दुबै भबिस्यमा घट्न सक्ने काम हरु भन्दै तपाईंले "त...त भबिस्यमा यस्तो हुन्छस रे" भन्नू हुन्छ होला । अज बढी ज्योतिषीले भनेका नकारात्मक कुरालाई धेरै ध्यानमा राख्दै दिनहुुँ त्यहीँ शब्द दोर्याउनु हुन्छ होला । यसको लागि हाम्रो मनले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ, किनभने यो पुर्ण रूपमा बैज्ञानिक र तथ्यपुर्ण छ । मानव प्राणी सङ्ग दुई किसिमका मन छन् , एउटा चेतन मन अनि अर्को अवचेतन मन हुन्छ । चेतन मन भनेको
यदि कुनै पनि बस्तुलाई देखेपछि, यो के होला, कसरी काम गर्छ होला तथा लडाइँ झगडा अनि सकारात्मक र नकारात्मक कुरा छुट्याउन सक्ने मन हो । अबचेतम मन भनेको चेतन मन द्वारा कुनै पनि शुचना दिनहुँ लामो समय सम्म पठाउछौ भने त्यो अवचेतन मन हो, यसले के ठिक के बेठीक छुट्याउनु सक्दैन बरु यसले बानीको रूपमा काम गर्छ । यसले गर्ने प्रमुख काम भनेको हाम्रो पाचन क्रिया, रत्तसञ्चार तथा मुटु धड्काउनु जस्ता धेरै स्वचालित कामहरू हुन् । अबचेतन मन भनेको सबैभन्दा प्रमुख हो किनभने यसले असम्भव कामलाई सम्भव बनाउछ , यो मनको प्रयोग धेरै बैज्ञानिक, लेखक, कबि, चित्रकार हरुले गरेका हुन्छन् । यो रचनात्मक र काल्पनिक दुबै हुन्छ । यसको सम्बन्ध नकारात्मक कुरा दिनहुुँ भन्ने सङ्ग सिधा रहन्छ, त्यसैले तपाईंले यदि कुनै नकारात्मक कुरा भान्जालाइ दिनहुुँ भन्न लाग्नु भयो भने त्यो कुरा भान्जाको मनले सत्य स्विकार्न थाल्छ । मलाई लाग्छ तपाईंले थ्री इडिएट फिल्म हेर्नू भएको छ, त्यहा एउटा डाइलग छ जुन डाइलग भन्नू भन्दा पहिले छातिमाथी हात राखेर "आल इज वेल" भन्नू भनेर आमिर खानले आफ्नो साथीहरु सुनाउछन् । डाइलग पछाडी एउटा सानो कथा छ , कथा के हुन्छ भने अमीर खानको गाउमा एउटा पाले हुन्छ । उसले राती सबै सुत्नु भन्दा पहिले, सधै चिच्याएर "आल.... इज वेल" भन्छ त्यो सुनेपछि गाउँला सबै मान्छे ढुक्क भएर सुत्छन । एकदिन राती चोर आउँछ र गाउँमा चोरी हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ पाले सङ्ग कुरा गर्न जादा थाहा हुन्छ कि । त्यसले त रातिमा आँखा नै देख्दो रहेनछ, अनि आल इल वेलको पावर बारे त्यो फिल्मको हिरोले थाहा पाउछ । आफ्ना साथीहरुलाइ यहीँ कथा सुनाउदै फिल्ममा आमिर खानले भन्छन् त्यो दिन मैले एउटा कुरा थाहा पाए हाम्रो मन छ नि, यो एकदम डरपोक छ त्यसैले यसलाई बेकुफ बनाएर राख्नु पर्छ । यो फिल्मको डाइलग सिधै गएर अबचेतन मन सङ्ग जोडिन्छ त्यसैले अबचेतन मनलाई भनेर हामी जति पनि असम्भव कामहरु पनि सम्भब बनाउन सक्छौं भान्जाले नि सक्नु हुन्छ । त्यसैले बच्चाहरुलाइ कहिले पनि नकारात्मक कुराहरु नभन्नुहोस नसिकाउनुहोस किनकि बच्चामा सुनेका र देखेका घट्नाहरु हाम्रो जीवनको अन्तिम समय सम्म रहन्छ । केही कुरा सिकाउनु पर्यो भने चित्र द्वारा प्रस्तुत गर्नुहोस् । किनभने हाम्रो दिमागले शब्दमामा हैन चित्रमा सोच्छ ।
यो भान्जालाइ जस्ताको त्यस्तै सुनाइ दिनु है दिदी,
सुर्यलाई माया गर्नुहोस् किनभने यसले हामीलाई उज्यालो दिएको छ, असफलता लाई माया गर्नुहोस् किनभने यसले ज्ञान दिन्छ, पुरस्कार लाइ स्वागत गर्नुहोस् किनभने यो तपाईंको मेहनत हो, धनी लाई माया गर्नुहोस् किनभने यिनी हरु एकदम कम छन्, गरिब लाई माया गर्नुहोस् किनभने यिनी हरु एकदम धेरै छन्, आफू भन्दा ठुला लाई माया गर्नुहोस् किनभने उनी हरु बुद्धिमान छन्, आफू भन्दा साना लाई माया गर्नुहोस् किनभने उनी हरु मायालु छन्, कुरुप लाई माया गर्नुहोस् किनभने उनीहरुको मन शान्त छ । कसैलाई दोष दिने नसिकाउनुहोस किन भने तपाई सङ अरुको कुरा काट्ने समय छैन ।
बाल्य अवस्था भनेको, केहि देख्ने बितिकै, के हो ? किन हो ? कसरी चल्छ ? किन चल्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु जाग्ने, हरेक कुरा हरु जान्न खोज्नु साथै जिज्ञासु हुने समय हो । यो बेला लागेको भोक बाबाआमा र घरपरिवारले सकेसम्म मेटाउने कोसिस गर्नु पर्छ, यसले बच्चा हरुको तर्क शक्ति बढाउछ, यसले बच्चाको मस्तिष्कमा भएका नयाँ न्युरोन लाई सुचारू र बढी सक्रिय बनाउदछ । बच्चामा हाम्रो दिमागले पचास भन्दा बढी भाषा सजिलै सिक्न सक्छ । नयाँ भाषा सिक्नुको पछाडि पनि धेरै पाइदा छन्, नयाँ भाषा सिक्नाले मान्छे अलि बढी क्रीएटिभ हुन्छन् साथै जति धेरै भाषा उतिकै धेरै प्रसनालिटी हुन्छ । नयाँ भाषाका कारणले धेरै रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ, डिप्रेसन तथा एन्जाएटी बाट बच्न सकिन्छ ।
बच्चामा हामी नेपाल बाट भारतमा गएर । छ महिना मात्र पढेका थियौं , छ महिना पछि परिक्षा भएर नतिजा आयो, नतिजा आश्चर्यजनक थियो, सबैलाई पत्याउनै गार्‍हो पर्यो । छ महिना अरुको भाषा पढेर त्यहीँका मातृभाषी लाई जितेर तपाईंले स्कुल टप्नु भएको थियो , धन्न म पास भएछु । त्यो देखेर त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाले भनेका थिए ...वाह कति राम्रा बच्चा, त्यो सुनेर हामी सङ्गै जानू भएको पापाको छाती फुलिएर आएको थियो । बडो अचम्मले हामीले एकपछि अर्को क्लास जम्प गरेका थियौं । हामी नेपाल आएपछि पनि, छ महिना पढेर म तेस्रो भए, त्यो देखेर भारतमा जस्तै नेपालमा अरुले हाम्रो कुरा गरेका थिए । हामी जति भाषा सिक्छौ, त्यतिकै भाषामा सोच्न पनि सक्छौं । त्यसैले भान्जालाइ अरु कुनै भाषा पनि पढाउने कोसिस गर्नुहोस् । बच्चाले गितार, पियानो, मादल, बासुरी जस्ता संगीतका बाजाहरु तुरुन्त सिक्न सक्छन्, यी सिक्नुको धेरै फाइदाहरु छन्, बच्चा ठुलो भएपछि जब तनाव लिन थाल्छन् त्यो बेला संगीतले ठुलो काम गर्छ । एउटा अध्ययन बाट संगीतले मानिस लाई तनाब मुक्त बनाउछ भन्ने भटिएको छ, त्यसतै बच्चामा नयाँ सीप वा बाजा सिक्दा हाम्रो दिमागमा भएका नयाँ न्युरोनहरु जुन करोडौं अर्बौंमा हुन्छन् तिनी सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले भान्जालाइ भान्जाको रोजाइ अनुसारको बाध्य बाधनका सामाग्री सिकाउनु जरुरी छ ।
यी कुराहरु गर्दा गर्दै हाम्रो बाल्यकालको याद आयो दिदी, हामी कति धेरै जिज्ञासीला थियौं । पापाले हरेक आइतबार पंजाब केसरी र बाल केसरी भन्ने अखबार हाम्रो लागि राख्दिनु हुन्थ्यो, हामी त्यो पज्जल मिलाउन, कसको जन्म दिन परेछ, कथा र चित्रकला हेर्न कति खोसाखोस गर्थिम ।
एकपटक एउटा अन्तर्वार्तामा अलवर्ट आइनसटाइनलाई एउटा पत्रकारले प्रश्न सोध्छ, - बच्चालाई बुद्धिमान बनाउन के गर्नु पर्छ ।
- उनले जबाफ दिन्छन् कथा सुनाउनु पर्छ । उसले फेरि सोध्छ
- अज धेरै बुद्धिमान बनाउन के गर्नु पर्छ ।
- अज बढी कथा सुनाउनु पर्छ ।
फेरि पत्रकारले सोध्छ
- जिनियस बनाउन के गर्नु पर्छ ।
आइनटाइन मुसुक्क मुस्कुराउदै भन्छन्
- धेरै कथा सुनाउनु पर्छ ।
बचपनमा सुनेका कथाले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले दिदि प्रत्येक दिन तपाई स्वयं धेरै भन्दा धेरै बालकथा र अन्य सकारात्मक कथाहरु पढेर भान्जालाइ सुनाउनु होस् । साना तिना काम गर्दा सङ्गै मिलेर गर्नुहोस्, भान्जाले पढे बापत रिवार्ड दिनुहोस् , गलती गरे बापत फिर्ता गर्नुहोस् । उदाहरणको लागि भान्जाले पढ्नु भयो अथवा राम्रो काम गर्नु भयो भने दस रुपैया पुरस्कार स्वरुप दिनुहोस् । यदी पढ्नु भएन वा ठुला बडा सङ्ग मुखमुखै लाग्नु भयो भने आठ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुहोस् । यस्तो गर्नाले भान्जाले पैसाको महत्त्व र पैसा सित्तैमा आउदैन यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुनेछ । साना तिना जिम्मेवारी हरु भान्जालाइ आफै गर्न दिनुहोस् त्यसमा तपाइले नसघाउनुहोस । यसले गर्दा भान्जाको आत्मबल बढ्ने छ, पछि अप्ठ्यारो पर्दा सजिलै सामना गर्न सक्नु हुनेछ । जीवनमा सधैं सकारात्मक भएर अघि बढ्नु पर्छ भनेर भनी राख्नुहोस । कोहि अरु बच्चाको सामु गाली अथवा थप्पड नहानुहोस, यसले भान्जाको बैइज्ज गरेको जस्तो हुन्छ, बाल मानसपटलमा यहीँ छाप बस्छ, त्यसैले घरमा एकलै राखेर भन्नुहोस् यसले गर्दा भान्जाले तपाईंको पनि इज्जत गर्नु हुनेछ ।
हामी सानो हुदा रेडियो नेपाल पंजाब सम्म सुन्निथ्यो । एकदिन तपाई र मैले रेडियो भित्रका मान्छे लाई भेट्नु पर्यो भनेर रेडियो फुटाएर भित्र हेरेका थियौं, टिभीका चक्का भाचेर भित्र मान्छे हेर्थिम, क्यासेट खोलेर हूहूहू गर्ने धागो बनाएर टास्थीम, गाउँ भरिका बच्चा जम्मा गरेर घरमा राखेका कोकाकोला र जुस सकेका थियौं । हामी नेपाल बस्दा हजुर आमा तथा गाउँका बुडापुरानाले बिहान हिद्डा कतै जमीन बज्यो भने त्यहाँ मुनि पुराना मान्छेले पैसा गाडेका हुन्छन् भन्थे, खाना नखाइ खन्यो भने भेटाइन्छ भन्थे । हाम्रो हजुरबुबाले पनि गाड्नु भएको छ रे, भन्ने गर्थे । हामीले दोकान बाट पैसा चोरेर बालुवामा गाडिम अर्को दिन बिहानै खाना नखाइ त्यहाँ गएर उफ्रेको केही बजेन अनि पैसा पनि कता सर्किएछन भेटिएन, त्यो देखेर हामी दुई बहिना कति निरास भएका थियौं । एकफेर बाल्यकाल तर्फ जाउ है दिदी,
दाइले बाइक चलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, म दाइको वरपर घुम्दै थिए । दाइले त्यतिकैमा नयाँ कुरा परिक्षण गर्ने सोच्नु भएछ, मलाई मेरो औंला साइलेनसरको प्वाल भित्र राखेर धुवाँ बन्द गर्न लगाउनु भयो अनि बाइक स्टार्ट गर्नु भयो । त्यसपछिको भयावह स्थितिको त तपाई हरुले अवश्य पनि कल्पना गरि सक्नु भयो होला ।
हाम्रो घरमा घाँस काट्ने मेसिन थियो, सधैं जसो त्यहा घाँस काटेर सानो बनाउनेको भिड हुन्थ्यो । कसले कसरी काट्छ भनेर हामीले सधैं हेर्थिम, एकदिन मौका मिल्यो र तपाई र म त्यहाँ गयौं । तपाईंले तैले हात यहाँ राख, म मेसिन चलाइछु भन्नू भयो, मैले निर्धक्क सङ्गले मेरो कान्छी औंला राखे । एकैछिनमा तपाईंले मेरो औंला काटिदिनु भयो ।
गाउँ बाट हजुरआमा जानू भएको थियो, हजुरआमा म दिदी अनि दाइ भएर रेल्वे तिर जाउ भन्ने सल्लाह गरिम । त्यहाँ बेल पनि खान पाइने अनि रेल पनि देख्न पाइने भएकाले कसैले हुन्न भन्ने भएन । रेल्वे लाइनमा धेरै मान्छे लाई मारेको रेलले टुक्राटुक्रा बनाएको घटना खुबै सुन्थ्यौ, त्यसैले मलाई प्रयोग गरेर हेर्नू थियो । रेल्वेमा गएर घुम्दै थियौं, पारितिर बाट रेल हामी तर्फ आउदै थियो म रेललाइनमा गएर रेल हिड्ने बाटो माथि हात राखेर घुप्टो मन्टो लगाएर सुते । दाइ हजुरआमा अनि दिदि म भन्दा अलिकति टाढा हुनुहुन्थ्यो, दाइ चिच्चाउदै म तर्फ दौडेर आउनु भयो मलाई उठाएर तलतिर फाल्नु भयो, दुइभाइ लडेर तल पुग्यौं । उठ्दा हातभरी चोटै चोट लागेलो थियो, हजुरआमा र दिदिले भने आफुहरु लाई धेरै नजिक भएकाले रेलको हावाले उडाएको भनेर गफ दिनु भयो ।
केही दिन अघिमात्र हाम्रो स्कुलमा एउटा जादुगर आएर गएको थियो । त्यो देखेपछि मैले जादु देखाउछु भन्दै, तपाइँलाई करेन्टका दुई नाङ्गा तार मुख भित्र राख्न भनेर स्विचअन गरे,
तपाईंको मुख र दात बाट रगत आयो ।
त्यसपछि डरले हतार हतार स्विचबन्द गरेको थिए ।
हाम्रो घर अघि तीन वटा आपका भयंकर रुख थिए, तिनको नजिकै अम्बा र जामुनका पनि रुख थिए । आपको रुखमा कागले गुड बनाएको थियो, कागले, हामीले खाएर फालेका रोटीका टुक्रा टिपेर गुड्मा बसेर खान्थ्यो । एकदिन हाम्रो सल्लाह भयो, कागको गुड हेर्ने । त्यसपछि म आपको बुटामा चढे अनि गुडमा हेरे कागका अण्डा रहेछन् । रुखमै बसेर अण्डा खेलाउदै थिए, एक्कासि काग आयो । अनि मलाई आक्रमण गर्न लाग्यो, कहिले मेरो टुप्पी तान्ने कहिले नाक तान्ने कहिले ठुग्ने गर्दै थियो । म एकदम आतिएर हतार हतार झर्ने कोसिस गर्दै थिए । सायद बिच्चमा आउँदा होला, म त्यहाँ बाट सिधै जमीन तिर झरे, हावामा उडे झैं त लाग्छ, कति बेला जमीनमा खसे पत्तै पाएन । त्यो ताका मेरो ढाड र शरीरको अन्य भागमा पिलो आएको थिए । म बिउझिदा कुल्लर बाट चिसो हावा म तर्फ आइरहेको थियो । म सङ्गै तपाईं मलाई हेरेर बसि राख्नु भएको थियो । म होस् मा आएपछि तपाईंले भन्नू भएको थियो । पापाले उठाएर मलाई घरमा ल्याउनु भएको रे, मम्मी पनि आतिएर हेर्न आउनु भएको थियो रे, म जाग्दा भने मम्मी हाम्रो लागि चिया र बिस्कुट ल्याउन पसल जानू भएको थियो । त्यो दिन देखि म पिलो मुत्त भए भने काग हाम्रो दुश्मन भयो । हामी दुई भाइबहिना लाई जहाँ देख्यो त्यहीँ आक्रमण गर्न आइ हाल्थ्यो । एकताका हाम्रो मम्मी सित बाहेक, त्यो काग कसै सित डराउने थिएन, ठुङ्न आइ रहन्थ्यो ।
हामी बस्ने एरियामा हामीले आफुलाइ डन भन्थ्यौ, त्यहा हामी सित पङ्गा लिने एकजना केटि मात्र थी । उसको टाउकोमा कहिले कपाल हुने थिएन त्यसैले गन्जी भनेर जिस्काउथ्यौ तर उसको एउटा गतिलो हतियार थियो । जसको अगाडि पर्न कसैको हिम्मत हुने थिएन त्यो हतियार थियो, त्यसैको घर अघि बस्ने नालीको भ्यागुतो । भ्यागुतो हातमा समाएर हाम्रो मुखमुखमा ल्याएर हाम्रो सातोपुग्लो खाइदिन्थी । हामी स्कुल जाने बाटो त्यसैको घर अघिको थियो । सधैं हामीलाई नै कुरेर बसिकी हुन्थी, कहिलेकाही त्यसलाई झुक्याएर पिटेर स्कुल जान्थ्यो भने कहिले काहीं हाम्रो झोलामा भ्यागुतो राखेर हामीलाई खुब तर्साउथी । त्यसरी नै दिनहरू बित्दै थिए, हाम्रो घर नजिकै बिहार बाट घर भाडामा बस्ने मान्छे आएका रहेछन् । तिनीहरुका हामी जत्रै छोराछोरी थिए, सधैं घर बाहिर आएर भात खान्थे । त्यो देखेपछि हामी चिच्याउदै , "पैयारानी चावल खान्दी बाहार आके चाडु मार्दी अन्दर जा के" भन्थ्यौ । यसैको कारण तिनीहरु सङ्ग हाम्रो दुश्मनी बढेको थियो ।
एकदिन तपाईंको भेट उनीहरु सङ्ग भएछ, फाइट पनि परेछ । तपाईंले हतारहतार आएर मलाई भन्नू भयो । हामी दुई बहिना भएर लड्न जानू पर्छ भन्दै त्यहाँ गयौं, जाने बितिकै फाइट सुरु भयो । हामी दुई दिदीभाइले भक्कु कुटेर घर पठाइ दियौं । मनमा एकदम गौरवको सोच आइरहेको थियो, एकातिर मम्मी र पापाको डर पनि लागेको थियो । मम्मी पापाले थाहा पाउनु भयो भने हाम्रो छालाकाड्ने त पक्का नै थियो । त्यसैको बेलका घरका सबै सदस्य बाहिर बसेर टिभी हेर्दै थियौं । मम्मीले रोटि बनाउदै हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो घर बाहिरको मेन ढोका कसैले बजायो । पापा गएर ढोका खोल्दिनु भएको मात्र के थियो , बाहिर बाट आवाज आयो ।
हाएहाए ऎ क्या हाल... कर्दिया रे हमारे बच्चे का ? यिनका मल्मपट्टी कौन करेगा, और मेरे बच्चेका नाक और कानका सोना कौन देगा ?
त्यो देखेर मम्मी पापा अचम्म पर्नु भयो, त्यसपछि यो कसले गर्‍यो भनेर सोच्नै परेन । बाहिर लडाइ गरेको ठाउँमा गएर नाकको फुलि र कानका मुन्द्रा खोज्न लगाउनु भयो, जति खोज्दा पनि भेटिएन ।
नभेटेपछि पापाले भन्नू भयो
- ल... अब घर हिडौ जाउ ?
तपाईं लाई थाहा थियो घरमा आज भक्कु पिटाइ हुनेवाला छ त्यहीँ भएर तपाईंले जान मान्नु भएन । पापाले तपाईं लाई रोडमा लतार्दै घरमा ल्याउनु भयो । म सानो भएको र तपाईंको सल्लाहमा लागेर त्यस्तो गरेको भन्दै मलाई केही गर्नु भएन, म पिटाइ खान बाट जोगिए तर तपाईंले पिटाइ खाएको देखेर म पनि खुब रोए । पापा र मम्मीले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नु भयो ।
हाम्रो पालमा फ्री च्यानल भनेको दुरसचार मात्रै थियो । हरेक आइतबार मात्र एउटा सादा फिल्म, मिक्की माउस अनि एउटा रङ्गिन फिल्म आउथ्यो । हामी फिल्म भनेसी हुरुक्कै हुन्थिम, नेपाली फिल्मका चक्का पनि सबै हेरेर सकेका थियौं । दिदिभाइ बसेर एकदिन बिचार गर्‍यो, हाम्रो घर नजिकै छतबाट केवल लगिएको थियो । केवलको तारनजिकै गएर बस्यो भने त्यहाँ वरपर हिड्ने मान्छेले सङ्का गर्थे । त्यहीँ भएर छतमा जानू पनि उचित हुने थिएन । एकदिन मैले छतमा गएर, सानो तार केवलको तारबाट हाम्रो एनटिनामा जोड्ने निर्णय गरे । तपाईंले पनि हुन्छ भन्नुभयो । सानो तार जुन झट्ट आखाले देख्न सकिने थिएन, त्यहीँ तार लगेर एन्टिनामा जोडे । जोडिसकेपछी त्यहाँ वरपरका मान्छे लाई देखाउन
चिच्याउदै शान्ती आयो भन्दै एनटिना घुमाए । तपाईंले आयो आयो झर भन्नू भयो । त्यसपछि त, जी-सिनेमा, गोल्ड स्टार अनि म्याक्सको बाँस हुन् थाल्यो । त्यति धेरै च्यानल टिपेको देखेर मम्मी पापा अनि हाम्रो घरमा आउने नातेदार हैरान बनेका थिए । सबैको एउटै कुरा थियो एन्टिना नजिकै बाट केबल लगिएकाले यसतो भएको । तपाई र म भने मख्ख थियौ । लगभग डेढ वर्ष जति हामीले त्यो फ्री केवल चलायौ ।
पापाको हातमा ॐ लेखिएको ट्याटु थियो, त्यसैको माथी बाघमाथी बसेकी दुर्गाको ट्याटु थियो । मैले धेरै पटक पापालाइ मलाई पनि ट्याटु हान्दिनु भनेर कराएको कराए गर्थे । खादा, बस्दा, उठ्दा, स्कुल जादा जति बेला पनि त्यही भनेर हैरान बनाउथे । एकदिन हाम्रो दोकानमा हात्ती आएको रहेछ, मम्मीले मलाई लिन घरमा आउनु भयो । हात्तीलाई देख्न त पहिले पनि देखेका थियौं तर हात्ती देख्ने बितिकै खुब डरलाग्थ्यो । भयंकर शरीर, लामो सुड अनि पसल पसल पैसा माग्दै हिडेको देखेर, कतै हाम्लाइ पनि भेटायो भने सुडले समाएर माथी लैजान्छ अनि हामी सङ्ग पैसा माग्छ भन्ने डर मनमा आइहाल्थ्यो । तर त्यो दिन मम्मीले मलाई हात्ती अघि राख्नु भयो । हात्ती र मेरो त्यो पहिलो आम्नेसाम्ने थियो । म चिच्याएर रुन थाले, पापाले हात्ती वाला लाई बोल्दाउदै भन्नू भयो, यसलाई नि त्यति तपाई माथी लगेर बसाउनुहोस, हात्तीवालाले मलाई हात्तीमाथी राख्यो, म चिच्याएर रुदै हात्तीलाई आफ्ना साना औंलाले चिम्ट्न लागे । हात्तीले आफ्नो सुड म तर्फ ल्यायो... म झन चिच्याए । त्यसपछि हात्ती बाट मलाई तल झरियो, त्यो दिनभरि नै म रोएको रोए गरे । पापाले मलाई फकाउन साइकलमा राखेर, खेलाउन किन्न लगाउनु भयो अनि म शान्त भए । त्यसदिन देखि जब पनि मैले ट्याटुको कुरा गर्थे मलाई हात्तीमा चढाउने भनेर तर्साउनु हुन्थ्यो । दिनहरु जति बित्दै थिए, मलाई ट्याटु हान्ने रहर झन्झन् जाग्दै थियो । एकदिन स्कुलको कक्षा कोठामा बसेर, ज्यामितीमा भएको कम्पासले मेरो हातको पछाडि ॐ लेखे । मैले लेखेको ॐ क्लासमा सबैलाई देखाए सबैले जनाले अचम्म मान्दै, आफुलाई पनि हान्न रहर भएको र त्यो हान्ने काम पनि मै बाट हुनु पर्ने भन्ने भयो । त्यसपछि मैले कसैको हात पछाडि, कसैको हातको नाडिमा जजसको जहाँ जहाँ इच्छा हुन्छ त्यही त्यही हानिदिए । एकजना ग्रुप्रीत भन्ने साथी थियो त्यसको हातको नाडीमा हानेको, उसको नसामा परेछ । अर्को दिन उ स्कुल आएको थिएन, हामी सबै आआफ्नो ट्याटु सो गर्दै थियौ । कक्षा कोठामा म्याम आउनु भयो र भन्नू भयो । हिजो स्कुल बाट गएदेखी ग्रुप्रीतलाई ज्योरो आएको अनि रातिनै हस्पिटल भर्ना गरिएको छ । उसको हातको इन्फेक्नले गर्दा उ बिरामी भएको भन्ने जानकारी डाक्टरले दिएको भनेको छ । यहाँ हिजो कम्पासले ग्रुप्रीतको हातमा कसले लेखेको हो भने त्यति बेला दिदी तपाईं मोनिटर हुनुहुन्थ्यो । तपाईंको डरले र आफ्नो हातमा नि त्यस्तै ट्याटु भएकाले कोहि बोलेनन् । म्याम रिसले चुर हुँदै सबैलाई गाली गर्न लाग्नु भयो अनि सबैको हात चेक गर्नु भयो । एकपछि अर्को सबै केटाहरुको हातमा ट्याटु देखेर म्याम पुरै सक हुनुभयो । सबैलाई पालोगरी गरि अफिसमा बोलाउनु भयो, त्यहाँ अचम्म त के भयो भने कसैले पनि आफ्नो मुख खोलेनन् । त्यसपछि म्यामले सबैलाई स्कुल पढ्न नदिने भन्नू भयो । हामी सङ्गै पढ्ने नेपाली साथी सुशील र सन्दीप थिए । सन्दीप त्यो दिन स्कुल आएको थिएन । मैले मौका समाएर उसैले गरेको हो भने, अरुले नि हो मा हो थपे । सन्दीपले पनि म बाट इन्सपाएर भएर तीन जनाको ट्याटु हानेको थियो । सन्दीप लाई त्यो स्कुल भर्ना गरिदिएको हाम्रै घरबाट थियो, त्यो सुनेपछि म्यामले मलाई घरमा गएर मम्मीलाई बोलाएर आउनु भनेर पठाउनु भयो । अब मलाई फर्साद पर्यो, बोलेपछी न शब्द फिर्ता गर्न सकिने, न मैले जिस्केर भनेको भन्न मिल्ने । घरमा पापा वा मम्मीलाई भनेर स्कुल लैजानु भनेको, आफ्नो काललाइ निम्तो दिनु जस्तो लाग्यो मलाई । म गन्जीको घर देखि अलि वर रहेको एकदम फोहोर घरमा बसे , तीस मिनेट जति त्यहीँ बसेर स्कुल गए । स्कुलमा आउनु मान्नु भएन भने, म्यामले तपाईं सङ्ग अर्को दिन सन्दीपको बाबा र तिम्रो घरबाट बोलाएर ल्याउनु भन्नू भयो । अर्को दिन मम्मी पापा अनि सन्दीपको बाबा जानू भयो । पहिले त सन्दीपलाई र मलाई स्कुल बाट रेस्टिगेट गर्ने कुरा भएछ । निकै माफी मागेपछि र फेरि यस्तो गलती फेरि नहुने भनेपछी एकपटकलाई भन्दै स्कुलले माफी दिएछ । त्यो दिन देखी ट्याटुको रहर पनि गयो अनि ट्याटु खोप्ने मन पनि ।
पापाले कुकुर भनेर खेलाउन दिनु भएको कुकुर बादर हो भन्ने थाहा नपाएर , हामी दुई दिदीभाइ लाई घरभरी लखेटेको थियो । त्यसको एकदुई महिना पछि हाम्रो घरमा सानो कुकुर आयो । हामीले कुकुर सित बद्ला लिनुपर्छ भन्दै कुकुरलाई खेत जोतेपछी डल्ला फोर्न प्रयोग गरिने मेसिनमा राखेर रेटेरेटे पार्यो, कुकुर डराएर त्यहाँ बाट भाग्यो । ठुलो दाउराको झाङ्म मुनि गएर लुक्यो त्यो देखेर । त्यो झाङ्ममा आगो लगाउनु पर्छ भन्दै त्यहाँ आगो लगायौ । त्यो आगो यति ठुलो भयो कि त्यो आगो निभाउन हाम्रो घर नजिकै भएका कम्पनीहरु चन्नी मिल, शुक्ला मिल, जगदम्बा मिल , असोका मिल गाउँ वरपरका सबै मान्छे अनि दमकल आएर बल्लतल्ल आगो निभाए । हामी जौको थुप्रोमुनि लुकेर बसेका थियौ । सबैले आज बहादुरका छोराछोरी आगोमा परेर मरेछन भनेर गए । मम्मी पापाले हामी दुई बहिनालाइ खोजेको खोजे गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सबै गएपछि दाउरा मालिक आयो अनि सबै गएको देखेर, हामी दुई बहिना पनि त्यहाँ बाट निसक्यौ । मेरा यिनी दाउरा दुई लाखका हुन् तुरुन्त पैसा दिनु पर्यो भनेर कडिकडाउ गर्दै थियो । एकैछिनमा उसको छोरा आयो अनि बुवालाइ सम्झायो झन्न यिनका छोराछोरी बाचेछन, पैसा अलि पछि दिए पनि हुन्छ । तर बच्चाको नजिक आगो राख्नु हुदैन भनेर धेरै सम्झायो ।
हामी दुई दिदिभाइले सानो बच्चा हुदा गरेका बिठ्याइ गन्न लाग्ने हो भने पुरै पुस्तक नै बन्छ होला । दिदि यसबाट हामीले धेरै कुराहरू आफै सिक्नु पर्छ । भान्जा सङ्ग खेल्ने समय निकाल्नु पर्छ, सबैभन्दा धेरै त कथा कविता अनि पुस्तक पढ्ने बानी लगाउनु पर्छ । आफ्नो कक्षा भन्दा बाहिरका धेरै पुस्तक पढ्ने बानी लगाउनु पर्छ दिदी । यो संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान बस्तु केही छ भने त्यो पुस्तक नै हो ।
वैज्ञानिक, मनोबैज्ञानिक तथा खोजकर्ता हरुले अहिलेसम्म बच्चाका बानी व्यबहार, सोच्ने तरिका, बोल्ने तरिका पढ्ने तरिकामा वर्षौं देखी ठुलो अनुसन्धान गरेको छ । त्यो मेहनत अनि तपस्या बाट थुप्रै उपलब्धी हरु हासिल भएका छन् । यी उपलब्धि हरुले हाम्रो जीवन तथा बच्चा हरुको जीवन परिवर्तन गर्नमा अहम् भुमिका खेल्दछ । तिमीले यो गर्ने पर्छ, तिमीले यो खानै पर्छ, तिमी त्यहाँ जान्नै पर्छ, मैले भनेको मान्नै पर्छ, उ फलानोले जस्तै गर्ने पर्छ, फलानो तिमी भन्दा धेरै जान्ने सुन्ने छ, यस्ता वाक्यहरु दिदी तपाईंले नि भान्जालाइ दिनहुँ भन्नूहुन्छ होला । यो सुनेर भान्जाले नि आफुले सकि नसकी गर्ने प्रयास गर्नु हुन्छ होला, सायद तपाईंले तिमी डाक्टर अथवा इन्जिनियर बन्नै पर्छ भन्ने कुरा दिमागमा फिट गर्दी सक्नु भयो होला । वास्तवमा भन्ने हो भने भान्जालाइ डाक्टर भनेको के हो भन्ने थाहा नै छैन । कतिपय यस्ता कुराहरू होलान् जुन कुरा भान्जाले गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला । तपाईंले ज्ञानी मान्छेले यस्तो गर्दैनन् थप्पक बस्छन् भन्नू हुन्छ होला । पल्लाघरे सुजनले "क ख ग" पढेको सुनेर तैले त, जति सिकाए पनि जान्दैन्स, उ सुजन लाई हेर त, सबै जानी सक्यो भन्नू हुन्छ होला, अरु केटाकेटी हरु सङ्ग खेलेको देखेर, ऊनी हरु अघि गएर मार थर्काएर वा थप्पड हानेर घरमा ल्याउनु हुन्छ होला ।
म अठार वर्षको हुन लाग्दा, मम्मीले ज्योतिषीका गएर चिनो देखाएर आउनु भएछ, अनि मलाई भन्नू भयो अठार वर्षमा बिहे हुने सम्भावना छ रे, बिहे भयो भने दुख हुन्छ रे, केटी पछि लाग्छे रे, केटी बाट बचेर हिडेस भन्नू भयो । त्यो सुनेपछि, म बाहिर हिड्दा कोही भेटी हाल्यो भने, स्कुलमा कोहि बोल्न आइ हाल्यो भने, हे... बा मलाई नबोलाए हुन्थ्यो भनेर बस्थे । कसैले बोलाइ हाल्यो भने तर्सेर बोल्थे । किन भने त्यहाँ मलाई बिहे भयो भने, पछि के हुन्छ भन्ने कारण थाहा थियो । त्यसैले दिदि तपाइँले पनि भान्जालाइ सम्झाउनु पर्यो भने यस्तै कारण सहित समझाउनु होस् । यसले गर्दा आमा छोराको सम्बन्ध त, राम्रो हुने नै भयो अर्को तिर भान्जाले गलत काम गर्न बाट आफै सजक हुनुहुनेछ । कहिले पनि कसैसँग तुलना नगर्नुस् बरु तिमिले पनि मेहनत गर्‍यो भने सक्छौं भन्नूहोस् । सधैं कर्ममा बिश्वास गर्न सिकाउनुहोस । मेहनत र लगनशीलता भन्दा ठुलो केही छैन भन्ने कुरा बारम्बार भनिराख्नुहोस ।
अरु सित तुलना गर्नु तथा ऊनीहरुको रुचि बिनाका कामहरू गर्न लगाउनु भनेको बच्चा हरुलाइ आफू प्रति बिश्वास गर्न बाट बन्चित बनाउनु हो, हिनताबोध गराउनु हो । जब कुनै आमाले आफ्नो छोराछोरी लाई कमजोर असक्षम अनि काम नलाग्ने भन्छिन भने बच्चाले आफुलाइ कमजोर सोच्न थाल्छन् । बच्चा हरुको रोल मोडल कि त आमा हुन्छन् कि त बुवा, यदि आमा बुवा बाटै नकारात्मक कुराहरु सुन्न थाले भने ऊनी हरुले आफुलाइ, आफै बिश्वास गर्न छाडिदिन्छन अनि बच्चा हरुको जीवनमा अधोगती लाग्न सुरु हुन्छ । तैले यो गर्न सक्दैनस भन्ने तिर भन्दा पनि तैले यो गर्न सक्छस भन्ने तिर बडि जोड गर्नुहोस् । सकेसम्म बच्चालाई यो संसारमा गर्न नसकिने केही छैन भन्नू पर्छ, उसको ढाड्स बनेर उसको पछि बस्नु पर्छ । यदि केही नयाँ कुरालाई गर्ने कोसिस गर्दै छन् भने तिमी सक्छौं गर गर भन्नू पर्छ, ऊनीहरुमा उत्साह थप्नु पर्छ ।
एउटा परिवारमा बुवा आमा अनि छोराछोरी हुन्छन् । एकदिन अचानक छोरा बिमारी पर्छ, लामो समय सम्म उसलाई हस्पिटलमा राखिन्छ । एकदिन बाबा घरमा आएर उसको आमालाई भन्छ, खै अब मैले बचाउन गाह्रो छ धेरै खर्च लाग्छ रे, टाउकोमा खै केके भएको छ रे । हामी कहाँ बाट त्यति धेरै पैसा ल्याउनु, डाक्टरले नि अब त हाम्रो छोरालाई चमत्कारले मात्र बचाउन सक्छ भनेका छन् । त्यो सुनेर उसकी आमा खुब रुन्छिन । त्यो दृश्य नजिकै बाट सानी छोरीले हेरिरहेकि हुन्छे । आफू सङ्ग भएको पैसाको खुत्रुके बोकेर औसधि पसलमा जान्छे अनि आँखा भरी आँसु पार्दै भन्छे ।
- डाक्टर साब डाक्टर साब, मलाई चमत्कार दिनुहोस् न,
त्यो सुनेर पसले अक्कमक्क पर्छ । त्यो दृश्य औसधि पसल वरपरका सबैले हेरिरहेका हुन्छन् । फेरि उसले भन्छे
- दिनुहोस् न...
औसधि पसले केही बोल्दैन । त्यहीँ नजिक भएका एकजना सज्जन, उ तर्फ आउदै भन्छन् ।
किन नानी, किन चाहियो चमत्कार,
बच्चीले गहभरी आँसु बनाउदै भन्छे,
" मेरो दाइ लाई हस्पिटलमा राखिएको छ, उसलाई चमत्कारले मात्र बचाउन सक्छ रे, त्यहीँ भएर म चमत्कार किन्न आएकी"
त्यो सुनेर त्यो सज्जनले भन्छ तिमी सङ्ग कति पैसा छ ?
बच्चीले आफ्नो खुत्रुक्के जमीनमा फालेर फोड्छे, पैसा यताउता छरपस्ट हुन्छ । एकएक हातमा समाउदै गन्छे एक दुई गर्दै उ सङ्ग जम्मा उन्नाइस रुपैया हुन्छ, त्यति देखाउदै भन्छे
- उन्नाइस रुपैया छ हुन्छ ।
- ओहो उन्नाइस रुपैया किन नहुनु यति पैसा त हो लाग्ने, भन्दै त्यो पैसा आफुले लिन्छ । उ न्युरो डाक्टर हुन्छ उसको दाइको अप्रेसन त्यहीँ उन्नाइस रुपैयामा गरिदिन्छ । छोरालाई निको भएपछि घरमा चार जना बसेर खाना खाइरहेका हुन्छन् त्यतिकैमा उसकी आमले भन्छे
- "तपाईंले त चमत्कार गर्नु भयो नि, कसरी गर्नु भयो" यो सुनेर गहभरी आँसु ल्याउदै उसले भन्छ
- मैले उ...उसले गरेकि हो यो चमत्कार ।
बच्चा हरुले कहिले पनि आफुले गर्न सक्दैन भन्ने मान्न चाहादैन्न । यो कथा मात्र हो, एउटा अपबाद मात्र हो ।
तपाईंलाई कतिको याद छ दिदी, हामी सानो हुदा जामुनका पात टिपेर सानी बहिनी बिमलालाइ दिएर बिस्कुट किन्नको लागी, लालाको दोकानमा पठाउने गर्थिम । बिम्लीले गएर लिएर आउथी हामीले अचम्म मान्थिम । त्यो लालाले बहिनीलाई माया गरेर मिठाइँ दिएको हुन्थ्यो ।
जीवनमा दुई किसिमका मान्छेहरु हुनेछन् एक जस्तो सुकै अप्ठ्यारोलाई पनि सजिलो रूपमा लिन्छन् अनि अर्को थरी हुन्छन्, अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने बितैकै मेरो जीवन नै सकियो, म डिप्रेसनमा जान्छु भन्छन् । भान्जालाइ कस्तो बनाउने तपाईंको हातमा छ । यसलाई एउटा कथाको माध्यम बाट प्रस्तुत गर्दै छु ।
एकदिनको कुरा हो थोमस स्कुलबाट घर आए र आमालाई एउटा चिट्ठी दिँदै भने – ‘आमा, यो चिट्ठी टिचरले हजुरका लागि पठाउनुभएको हो ।
आमाले तुरुन्तै चिट्ठी पढिन् । चिट्ठी पढिसकेर उनी रुन थालिन् ।
आमा रोएको देखेर एडिसनले सोधे –‘आमा, चिट्ठीमा त्यस्तो के लेखेको छ ? हजुर त रुन पो थाल्नुभयो ।’
आमाले आँशु पुछ्दै भनिन्, ‘चिट्ठीमा लेखेको छ “तपाईंको छोरा अत्यन्तै बुद्धिमान् र प्रतिभाशाली छ । हाम्रो स्कुल तल्लो लेवलको हो र टिचरहरु पनि त्यति राम्रा छैनन् । त्यसैले हामी तपाईंको छोरालाई पढाउन सक्तैनौं । अब आफ्नो छोरालाई तपाईं आफैं पढाउनुस् ।” आफ्नो बयान सुनेर एडिसन धेरै खुशी भए ।
उनलाई आमाले घरमै पढाउन थालिन् । भनिन्छ नि, ‘हरेक सफल व्यक्तिको पछाडि एउटी महिलाको हात हुन्छ । एडिसनका लागि ती महिला अरु कोही होइन, उनैकी आमा थिइन् ।
धेरै वर्षपछि उनकी आमाको निधन भयो । त्यसवेला सम्ममा विभिन्न किसिमका आविष्कारहरु गरेर एडिसन प्रख्यात वैज्ञानिक बनिसकेका थिए । एकपल्ट उनले केही खोज्ने क्रममा घरमा भएको दराजको एउटा कुनामा त्यो पुरानो चिट्ठी भेटे र उत्साहित हुँदै पढ्न थाले । चिट्ठी पढिसकेपछि उनी धेरै वेर रोइरहे । शिक्षकले उनकी आमालाई लेखेको त्यो चिट्ठीमा त्यस्तो के लेखेको रहेछ र उनी रोएका रैछन् त ?
त्यो चिट्ठीमा लेखिएको थियो –‘तपाईंको बच्चा मन्दबुद्धिको छ । उसलाई अबदेखि स्कुल नपठाउनुस् । ऊ हाम्रो स्कुलमा पढ्ने लायकको छैन ।
एडिसनले रुँदै आफ्नो डायरी निकाले र लेखे–‘एक महान् आमाले मन्दबुद्धि बच्चालाई शताब्दीकै महान् बैज्ञानिक बनाइ दिइन् ।’
अहिले लाई यतिनै लेख्छु दिदी , पत्र पाएपछि अर्को पत्र लेखन नभुल्नु होला भन्दै यो पत्र बाट बिदा हुन्छ ।
उहीँ तपाईंको भाइ
दक्षिण कोरिया, सउल
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख १२, २०७८, १८:०४:००